ပရောဖက်ပြုချက်ဆိုင်ရာအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းပုံရိပ် | A Prophetic Picture of Conversion | Real Conversion
ဒေါက်တာ အာရ်အယ်လ် ဟိုင်မာဂျေအာရ်၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိူဝင်ဘာလ(၁၃)ရက်၊ လောစ့်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်အဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Morning, November 23, 2011
“ကျေးဇူးတော်ကိုခံသောသဘော၊ ဆုတောင်းပဌာနာကို ပြုသောသဘောကို ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး ယေရုဆလင်မြို့သားတို့ပေါ်သို့ ငါသွန်းလောင်းသဖြင့်၊ သူတို့သည် မိမိတို့ကိုထိုးဖေါက် သောငါ့ကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်။ တယောက်တည်းသောသားအတွက် အဘငိုကြွေးမည် တမ်းသကဲ့သို့၊ ထိုသူအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းရကြလိမ့်မည်။ သားဦးအတွက်အဘနာ ကြဉ်းသကဲ့သို့ နာကြည်းရလိမ့်မည်။ (ဇာခရိ ၁၂း၁၀)
၁၈၆၄ခုနှစ်၊ စပါဂျန်သည် အနာဂတ်ဂျူးလူမျိုးများ အသက်တာပြောင်းလဲရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ ပရောဖက်ပြုချက်များဆိုင်ရာ ဒေသနာတော်နှစ်ခုကို ဟောကြားခဲ့သည်။ ပထမခေါင်းစဉ်တခုမှာ “ဂျူးလူမျိုးများ ပြန်လည်စုစည်းရေးနှင့် အသက်တာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး” ကို ဟောကြားခဲ့သည်။ သူဟောကြားရာ၌ “စစ်ရေးအရနိူင်ငံပြန်လည်စုစည်းရေးဖြစ်ပြီးအမျိုးအနွယ်(၁၀)ပါးက မိမိတို့နိူင်ငံကို ထူထောင်မည်ဟု ဟောကြားခဲ့သည်” (C. H. Spurgeon, June 16, 1864).
လွန်ခဲ့သော ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ရှစ်ဆယ်လေးနှစ်လောက်က ဣသရေလနိူင်ငံကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ စပါဂျန်က၊ ယေဇကျေလ၃၇း၁-၁၀ အထဲကထုတ်နုတ်ပြီး ကြိုတင်ဟော ကြားထားသကဲ့သို့၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဂျူးလူမျိုးများ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ ပြန်လည် ရောက်လာကြပြီး၊ ဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူသောနိူင်ငံ၌ ခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
၁၈၆၄ ခုနှစ်၊ သုံးရက်နေ့အစောပိုင်းက၊ စပါဂျန်သည် အခြားသောဒေသနာတောခေါင်း စဉ်ဖြစ်သော “နှစ်လုံးသားကို ထိုးဖေါက်ခြင်းခံရသူ”၊ ဇာခရိ၁၂း၁၀ကို အခြေခံ၍ဟောကြားခဲ့ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပါတ်သက်၍ စပါဂျန်ကမှန်ကန်စွာ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ဤပရောဖက်ပြုချက်များ သည် ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည့် အတိုင်းဂျူးလူမျိုးများကို ရည်ညွှန်းပြောနေခြင်းဖြစ်ပြီး ဘုရားရှင်မိန့် တော်မူသည့်အတိုင်းပေးသနားတော်မူသော ပြည်တော်၌ စုရုံးလာကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပြီးဖြစ် သည်”။
စပါဂျန်က၊ ဇာခရိ၁၂း၁၀သည် ဂျူးလူမျိုးများအဖို့သာမကပဲ၊ တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက် ချင်းတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ပြောင်းလဲမူကိုလည်း ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။
“ကျေးဇူးတော်ကို ခံသောသဘော၊ ဆုတောင်းပဌာနာကို ပြုသောသဘောကို ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး ယေရုဆလင်မြို့သားတို့ပေါ်သို့ ငါသွန်းလောင်းသဖြင့်၊ သူတို့သည် မိမိတို့ကို ထိုးဖေါက်သောငါ့ကို ရှု့မြင်ရကြလိမ့်မည်။ တယောက်တည်းသော သားအတွက် အဘငိုကြွေးမည်တမ်းသကဲ့သို့၊ ထိုသူအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းရကြလိမ့် မည်။ သားဦးအတွက် အဘနာကြဉ်းသကဲ့သို့ နာကြည်းရလိမ့်မည်။ (ဇာခရိ၁၂း၁၀)
ဤကျမ်းပိုဒ်အထဲက ခေါင်းစဉ် ၃ခုကို ကောက်နုတ်တင်ပြပါမည်။
၁။ ပထမ၊ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဟူသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဖြစ်သည်။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်၌ “ကျေးဇူးတော်ကို ခံရသောသဘော၊ ဆုတောင်းပဌနာပြုသောသဘောကို ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး၊ ယေရုဆလင်မြို့သာတို့ပေါ်သို့ ငါသွန်းလောင်းသဖြင့်” (ဇာခရိ ၁၂း၁၀)ဟူ၍ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ “ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလိုအလျှေက်ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သနားတော်မူရာ ဖြစ်သတည်း” (ဧဖက်၂း၈)။ “ကျေးဇူးတော်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? ဇာခရိ၁၂း၁၀၌ သုံးနှုန်းထားသော ကျေးဇူးတော်ကို (အကြင်နာတရား) မျက်နှာသာပေးခံရခြင်း “ကျေးဇူးတော်” ဟု ဟေဗြဲဘာသာစကားအရ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ (အထူး)။ ဧဖက်၂း၈ထဲက ကျေးဇူးတော်ကို၊ ၊အကြင်နာတရား၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ကယ်တင် ရွေးနုတ်ခြင်းဟူ၍ ဂရိဘာသာစကားအရ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ (အထူး)။ ဟေဗြဲဘာသာစကား အရသော်၎င်း၊ ဂရိဘာသာစကားအရ သော်၎င်း၊ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းသည် လူသားတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့်မဟုတ်ဟု ဖေါ်ပြနေ သည်။ အသက်တာအသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဟူသည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ သက်ရောက်လာခြင်း သာဖြစ်သည်။ သခင်၏ ကြင်နာသနားခြင်းနှင့် တန်ခိုးတော်အားဖြင့် အပြစ်နှင့်သေခြင်းငရဲမှ ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှု အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ယေရူဘုရား အသေခံပြီးရွေးနုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ “ကျေးဇူးမေတ္တာအံ့ဖွယ်ချိုသာ” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်!
(၁၇၂၅-၁၈၀၇၊ ဂျွန်နယူးတန်သီကုံးသော “ကျေးဇူးမေတ္တာအံ့ဖွယ်ချိုသာ”)
ကျေးဇူးတော်ဟူသည် ဘုရားရှင်၏သနားကြင်နာသော မေတ္တာတရားအားဖြင့် ရွေးချယ်သောသူတို့ကို ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ကျေးဇေူးတော်” ဟူသောစကား လုံးမပါသော်လည်း၊ တိတုဩဝါဒစာကျမ်းပိုဒ်ငယ်၃ခု၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ပြည့်စုံစွာရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ အထက်ကငါတို့သည် ပညာမဲ့သောသူ၊ နားမထောင်သောသူ၊ မှားယွင်းသောသူ၊ အထူးထူးအပြားပြားသောတပ်မက်ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း အမူတို့ကို ဆောင်ရွက်သောသူ၊ မနာလိုခြင်း၊ ငြူစူခြင်း၌ ကျင်လည်သောသူ၊ စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်သောသူ၊ အချင်းချင်းမုန်းသောသူဖြစ်ကြ၏။-ငါတို့ကိုကယ်တင် တော်မူသော အရှင်ဘုရားသခင်၏ စေတနာတော်နှင့် လူတို့ကိုချစ်တော်မူသော မေတ္တာတော်သည် ပေါ်ထွန်းသောအခါ၊ ငါတို့ကျင်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့် အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ၊ မိမိသနားခြင်းကရုဏာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင် သောဆေးကြောခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အသစ်ပြုပြင် ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏”(တိတု၃း၃-၅)။
ထိုကဲ့သို့ အနာဂတ်၌ ဂျူးလူမျိုးများသည် ရွေးနုတ်ခြင်းကျေးဇူးကို ခံစားရကြမည်။ အခုဆိုလျှင် ဂျူးလူမျိုးများသော်၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားများသော်၎င်း အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲနေကြ ပြီဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာ အသက်တာပြောင်းလဲကြသူများဖြစ်ကြသည်! ကျွန်ုပ်တို့သည် များဖြစ်ကြသည်ဆိုလို သည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်ကို ယုံကြည်ခြင်းဟူ၍ ဆိုလိုပါသည်။ တို့သည် များဖြစ်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားရှင်နှင့် ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့လိုသည်ဆိုခြင်းကို ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည်။ ရောမကာသိုလ်လစ် အသင်းတော်များနှင့် အခြားသောဘာသာရေးအပေါ် ယံဆန်သမား များကမိမိတို့၏ ကယ်တင်ခြင်းအဖို့ ဘုရားရှင်နှင့် ပူးပေါင်းရယူရမည် ဟူသော ဝါဒကိုကျင့်သုံး သူများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ၎င်းခံယူချက်ကို ငြင်းငယ်ပါသည်။ လူသားတို့ကယ်တင်ခြင်းအဖို့ ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာ ရရှိနိုင်သည်ဟူ၍ပြောဆိုပါမည်။
oifYtoufwmü ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်သည် အဘယ်မျှလောက်အံ့ဖွယ်လုပ်ဆောင် နေသည်ကို တွေးကြည့်ပါ။ ဘာကြောင့် ဒီကနေ့နံနက် မိတ်ဆွေ၊ သင်သည် ဤနေရာ၌ ရောက်ရှိလာ ရသလဲ? ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် မဟုတ်ပါလား၊ သူ့၏သနားကြင်နာခြင်းကြောင့်၊ သင့်အား ဤနေရာသို့ ဆွဲခေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်အား ဤအသင်းတော်မိသားစုမှ မွေးဖွားပြီး အသင်းသားဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါက၊ ထိုအရာသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ထိုသို့ သင်ဤနေရာ၌ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် သင်သည်အပတ်တိုင်း တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း တရားဒေသနာတော်ကို နားထောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေဇူးတော်ကို မပေါ့ပျက်ပါ စေနှင့် ဘုရားရှင်၏ သနားကြင်နာမှုကြောင့် သင်ဤနေရာ၌ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်၏။ ဘုရားရှင်၏ တရားဒေသနာတော်ကို နားထောင်နိုင်ဖို့ရန် ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးမေတ္တာတော်က သင့်အား ဤနေရာ သို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။!
အကယ်၍ ဤနေရာသို့ ကြွရောက်လာဖို့ သင့်အားတဦးတယောက်က ဖိတ်ကြားခြင်းခံ ရပါသော်လည်း သင်သည် ဘုရားရှင်၏ သနားခြင်းဂရုဏာကျေးဇူးကို ခံစားရသောသူဖြစ်သည်။ အများသောသူတို့ကို ကြွရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပါသော်လည်း၊ သူတို့သည်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြ သည်။ ဘာကြောင့် သင်သည် တက်ရောက်လာပါသလဲ? သူတပါးထက်တော်နေ၍ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ လုံး၀မဟုတ်နိုင်ဘူး၊ ဤနေရာသို့ တက်ရောက်လာနိုင်ဖို့ ဘုရားရှင်၏ မေတ္တာဂရုဏာ ကျေးဇူးတော်က ဆွဲခေါ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အသက်တာကယ်တင်ခြင်းရှိဖို့အလိုငှါ ကျေးဇူးတော်က သင့်အား အစဉ်အမြဲဆွဲခေါ်ပါမည့်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းနေလျှက်ပါ! ပြီးတော့ သင်၏ကိုယ်ပိုင် ဓမ္မသီချင်းကဲ့သို့ အမြဲသင်သီဆိုနိုင်မည်အကြောင်း ဆုတောင်းပေးလျှက်ပါ! “ကျေးဇူးမေတ္တာ၊ အံ့ဖွယ်ချိုသာ” ဓမ္မသီချင်းကို ပြန်လည်သီဆိုသည်
“ကျေးဇူးတော်ကို ခံရသောသဘော၊ ဆုတောင်းပဌနာကို ပြုသောသဘောကို ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး၊ ယေရုဆလင်မြို့သားတို့ပေါ်သို့ ငါသွန်းလောင်းသဖြင့်” (ဇာခရိ ၁၂း၁၀)။
၂။ ဒုတိယ၊ ထုံးစံအားဖြင့် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဟူသည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းမှ အစပြုပါ သည်။
“ထိုသူအတွက်ငိုကြွေးမြည်းတမ်းရကြလိမ့်မည်” (ဇာခရိ ၁၂း၁၀)။
အချို့သော အသင်းဝင်များသည် အပြစ်သားများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အတွေးအခေါ် အစီစဉ်ကို မနှစ်သက်ကြပေ။ အကြောင်းမှာ ဘုရားရှာင်သည် အချုပ်အခြားအာဏာရှင် ဖြစ်သည်ဟု အလေးပေးတွေးခေါ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ပြောကြားသည်မှာ လူတဦးကို မမွေးဖွါးမှီကပင် ထိုသူကို ဘုရားရှင်သည် သေခြင်းအပြစ်ငရဲ့မှ ရွေးနုတ်နိူင်သည်ဟူ၍ ယုံကြည်ပြော ဆိုကြပါသည်။ ထိုသူတို့က ဘုရားရှင်သည်တန်ခိုးအာဏာအလုံးစုံ၏အလုံးစုံအထွဋ္ဋ် ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြပါသည်။ ဘုရားရှင်အားဖြင့် လူအများတို့ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမည်ကို ရှေးမဆွကပြင်ဆင် မထားဘူးဟူ၍ အသင်းဝင်များ၏ ပြောကြားချက်သည် မှားမည်ဟုထင်မိပါသည်။ ထိုသူတို့ ကကျွန်ုပ်အား “ကြိုတင်ပြင်ဆင်သမား” ဟူ၍ ခေါ်ကြပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်အသေအချာယုံကြည်သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးနုတ်ကယ်တင်ဖို့ ဘုရားရှင် ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သည်ကို အခိုင်အမာယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ပြင်ဆင်ပေးသော နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ တိုတောင်းသော လူ့ဘ၀ကို မြင်တွေ့ စေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ (၁၇၀၃-၁၇၅၈) ယောနသန်အက်ဒ်ဝပ်ခေတ်တုန်းက “သူ့အသင်းတော် လူငယ်မောင်မယ်များအား အနိုးတကြားသတိရှိစေခဲ့သည်မှာ၊ မမျှော်လင့်ပဲ ရုတ်တရက် လူငယ်တစ် ယောက်သေဆုံးခြင်းကို သူတို့အားလုံးမြင်တွေ့ ရခြင်းမြင်ကွင်းကနိုးကြားအသိ၊ သတိရှိ စေခဲ့သည်။
အခြားသောနည်းလမ်းဖြင့် လူသားတို့အားကယ်တင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကို ဘုရားပြင်ဆင်ပေးသည်မှာ၊ မိမိတို့၏ အပြစ်ကိုထင်ရှားစေခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး- ၎င်းအတွက်ပြစ်ဒဏ်ခံရမည်ကို သိစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လူသားများအားငရဲနှင့်သတိပေးနေခြင်းက အမှားကြီးမှားနေသည်ဟု တွေးထင်နေကြပေမည်။ ထိုသူတို့ ပဲမှားနေတာပါ။ အပယ်ငရဲအားဖြင့် သူတပါးကို သတိပေးဘိဖ့ ငရဲမီးအိုင်ကို သင့်ပြင်ဆင်ပြီး၍ဖြစ် သည်! ၎င်းငရဲနှင သတိပေးခြင်းမရှိပါက တပါးသူတို့အပေါ် အကြင်နာမဲ့ရာကျပါမည်။ ယေရှုဘုရားလောက် သနားကြင်နင်သော သူရှိမည်မထင်ပါ။ သူသည် ကျွန်တို့ကို ငရဲရှိကြောင်းကို အဖန်ဖန်သတိပေးသောသူဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ “မြွေဆိုးအမျိုးတို့ သင်တို့သည် အပြစ်ငရဲမှ အဘယ်သို့ လွတ်နိုင်ကြမည်နည်း? (မဿဲ၂၃း၃၃)၌ သတိပေးထားပါသည်။ မိန့်တော်မူ ပြန်သည်မှာ “ထိုသူတို့သည် ထာ၀ရပြစ်ဒဏ်ကိုခံရာသို့၎င်း သွားရကြလတ္တံ့” (မဿဲ၂၅း၄၆)။
အပြစ်သားများ ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ဘုရာရှင်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းသည် မိမိတို့၏အပြစ်ကို ဖော်ပြပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ် တော်သည် “အပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်း၊ လောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာ ဖော်ပြမည်ဟု (ယောဟန်၁၆း၈) ၌ မိန့်တော်မူသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကလည်း မိမိ၏အပြစ်ကို သိနားလည်သောအခါ “အကျွန်ပ်ကျုး လွန်ပါပြီဟုဝန်ခံလျှက် ကိုယ့်အပြစ်ကို အစဉ်မပြတ်အောက်မေ့လျှက်နေပါ၏ (ဆာလံ၅၁း၃)၌ ဖော်ပြ ထားပါသည်။ အသက်တာပြောင်းခြင်းဟူသည် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှ သွန်းလောင်းတော်မူသော အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းကို ပေးပြီးဖြစ်သောယေရှုကို သင်အလိုရှိသည်ဟု သင်ခံစားလာဖို့ ဘုရားရှင်ကနည်းလမ်း ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုဘုရားကို သင်အမှန် တကယ်လိုအပ်နေသည်ကို သင်မခံစားသေးဘဲ သင်သည် ယေရှုသခင်ထံ တိုးဝင်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ် ပါ! ယောသပ်ဟတ်သီကုံးသကဲ့သို့၊ “သခင်ကို လိုအပ်နေသည် ဟုသင်ခံစားစေခြင်းသည်သင့် လျှော်သော သခင်တောင်းဆိုမှုပင်ဖြစ်သည်”။ မိမိ၏ အပြစ်ကို သိနားလည်ခြင်းသည် အပြစ်ခွင့်လွတ် သန့်စင်ခြင်းရရှိဖို့ သင့်အားသခင်ယေရှုထံတွန်းပို့ပေးပါသည်။ “သက်တာခရီး၊ ကြောက်ဖွယ်လမ်းမှာ” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်။
၃။ တတိယ၊ ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးသူသည် ယေရှုကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းဖြင့် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း တွေ့ကြုံရပါသည်။
သမ္မကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ ၊”သူတို့သည် မိမိတို့ထိုးဖောက်သော ငါ့ကိုရှုမြင် ရကြလိမ့်မည်(ဇာခရိ၁၂း၁၀)။ ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း၄၅း၂၂၌ လူသားဇာတိခံယူမည့် ခရစ်တော်မိန့် တော်မူခဲ့သည်မှာ
“ငါ့ကိုမျော်ကြည့်၍ ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကို ခံကြလော့” (ဟေရှာယ၄၅း၂၂)။
လူတိုင်းလိုလိုပင်၊ မိမိတို့၏ စိတ်ခံစားချက်များ ၊အတွေးအခေါ်ကိုသာ- ကြည့်တတfကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည်သာလျှင် ကျွန်ပ်တို့၏ ယေရှုသခင်ကို ကြည့်မျော်ဖို့ မစပေးသည်။ ထိုသခင်အားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြောင်းသိနားလည်ခွင့်ပေးသည်။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ယုံကြည်ခြင်းကသာ မိမိတို့ထိုးဖောက်သော သားတော်ကို ရှုမြင်စေသည်” ထိုသခင်ကို ရှုမြင်စေခြင်း သည်ထိုသခင်ဆီသို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြစ်၍၊ “ထိုသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်း” ဖြစ်သည်ဟူသော တူညီသော သဘောကို ဆောင်ပါသည်။
ထိုသခင်အထံတော်ပါးသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပြီး ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မျှော်ကြည့်ဖို့ကျွန်ုပ်တောင်း လျှောက်ပါသည်။ ယောသပ်ဟတ်သီကုံးရေးသားသကဲ့သို့၊ “ယေရှုမှတပါး၊ ယေရှုမှတပါး အပြစ်သား များအားမစနိူင်သူမရှိ”
“ကျေးဇူးတော်ကိုခံသောသဘော၊ ဆုတောင်းပဌာနာကိုပြုသောသဘောကိုဒါဝိဒ်မင်းမျိုး ယေရုဆလင်မြို့သားတို့ပေါ်သို့ ငါသွန်းလောင်းသဖြင့်၊ သူတို့သည် မိမိတို့ကိုထိုးဖေါက် သောငါ့ကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်။ တယောက်တည်းသောသားအတွက် အဘငိုကြွေးမည် တမ်းသကဲ့သို့၊ ထိုသူအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းရကြလိမ့်မည်။ သားဦးအတွက်အဘသည် နာကြဉ်းသကဲ့သို့ နာကြဉ်းရကြလိမ့်မည်။ (ဇာခရိ ၁ဝး၁၁)။
ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် သင့်အားအသင်းတော်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါစေသောဝ်- အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်ပိုင်းနှင့်ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစီစဉ်၊ မိတ်သဟာယနှင့် တရားဒေသနာ ဟောကြားခြင်း အစီစဉ်သို့ သင့်အားဘုရားကျေးဇူးတော်က ပို့ဆောင်ပေးပါစေ၊ တစုံတစ်ဦးက “ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်လူ သားများ တနင်္ဂနွေနံနက်ပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစီစဉ်သို့ လာစရာမလိုဟု သင့်အားပြောကောင်းပြောနိူင်သည်။ ထိုသို့ဆိုသော်၊ သင်သည်လည်းမှားနေပေမည်။ ဘုရားကျေးဇူး တော်က လူအပေါင်းတို့အားထိုကဲ့သို့ နည်းလမ်းအားဖြင့် မစနေ၍ဖြစ်သည်!
ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးဂရုဏာတော်သည် အင်မတန်တန်ခိုးကြီး၏၊တွန်းလှန်၍ မရပါ။ ရွေးချယ် သောသူ ဟူသမျှသည် အသင်းတော်သို့ ရောက်လာကြပါမည်။ စစ်မှန်သောအသက်တာ ပြောင်းလဲရေးအတွက် ခရစ်တော်သခင်ထံ တိုးဝင်ချည်းကပ်ရပါမည်။ (၁၇၁၂-၁၇၆၈) ယောသပ်ဟပ် သီကုံးသော “အပြစ်သားများလာနိုင်ကျုး” ဓမ္မသီချင်း နံပါတ်(၇)ကို ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက် သီဆိုကြပါဆို!
-ဆင်းရဲနုန်ချာ၍ ၊အားနည်းယုတ်ညံ့သော အပြစ်သားများငါ့ထံသို့လာ
သနားခြင်းဂရုဏာ တန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသူယေရှု သင့်အနား၌ ရှိ
တတ်စွမ်းနိုင်သောအရှင် ယေရှုအား ဒွိဟစိတ်မရှိနဲ့!
လေးလံသောဝန်ထုပ် ပိနေသူ အပြစ်သား ငါ့ထံသို့လာပါ
ဖြောင့်မတ်သောလူသားဖြစ်ဖို့ ယေရှုဘုရားသခင်ထံသို့ ချဉ်းကပ်
သင့်အပြစ်ကြွေး ပေးဆပ်ဖို့ မြေကြီးပေါ် ယေရှုလှဲလျှောင်းရရှာ
ကားတိုင်ထက် သင့်အဖို့ ငိုယိုကာ အသက်ပေးဆပ်သွားခဲ၏
“အမှုပြီးပြီ “ “အမှုပြီးပြီး” သင့်အဖို့ လုံလောက်ပြီမလား?
“အမှုပြီးပြီ “ “အမှုပြီးပြီ” သင့်အဖို့လုံလောက်ပြီမလား?
အသိစိတ်ကသင့်ကို မဖင့်နွဲပါစေနှင့် စိတ်ကူးယဉ်၍ မဝါကြွားနဲ
သင့်အဖို့ ထာ၀ရထိုက်တန်ခြင်း အဖိုးအခ ပေးချေပြီးဖြစ်၏
သင့်အဖို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အစဉ်ရှိစေတော်မူပြီဖြစ်၏
သင့်အဖို့ရဲဝံ့စွာ အသက်ပေးဆပ်ခဲ့ပြီ၊ သင်သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိနဲ့
ယေရှုမှတပါး အပြစ်သားများအား ကယ်တင်မယ့်သူမရှိနိုင်ပါ
(၁၇၁၂-၁၇၆၈ ခုနှစ်၊ ယောသပ်ဟပ်သီကုံးသော “အပြစ်သားများလာနိုင်ကျုး)။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်ဒေါက်တာခရိတ်တန်အာယ်ချန်မှ ဇာခရိ ၁၂း၁၀-၁၄ကို ဖက်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၇၁၂-၁၇၆၈ ယောသပ်ဟတ်)သီကုံး သော “အပြစ်သားများလာနိုင်ကျူး” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးသည်။
“ကျေးဇူးတော်ကိုခံသောသဘော၊ ဆုတောင်းပဌာနာကို ပြုသောသဘောကို ဒါဝိဒ်အမျိုး ယေရုဆလင်မြို့သားတို့ပေါ်သို့ ငါသွန်းလောင်းသဖြင့်၊ သူတို့သည် မိမိတို့ကိုထိုးဖေါက် သောငါ့ကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်။ တယောက်တည်းသောသားအတွက် အဘငိုကြွေးမည် တမ်းသကဲ့သို့၊ ထိုသူအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းရကြလိမ့်မည်။ သားဦးအတွက်အဘနာ ကြဉ်းသကဲ့သို့ နာကြည်းရလိမ့်မည်။ (ဇာခရိ ၁၂း၁၀)
၁။ ပထမ၊ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဟူသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ဇာခရိ ၁၂း၁၀၊ ဧဖက်၂း၈၊ တိတု၃း၃-၅။
၂။ ဒုတိယ၊ ထုံးစံအားဖြင့် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဟူသည် ငိုယိုမြည်တမ်းမှုခံစားခြင်းဖြင့် အစပြု ပါသည်။ ဇာခရိ၁၂း၁၀၊ မဿဲ၂၃း၃၃၊ ၂၅း၄၆၊ ယောဟန်၁၆း၈၊ ဆာလံ၅၁း၃။
၃။ တတိယ၊ ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးလူသားသည် ယေရှုကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းဖြင့် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းကို တွေ့ကြုံရပါသည်။ ဇာခရိ၁၂း၁၀၊ ဟေရှာယ၄၅း၂၂။